တရုတ် 140gsm Hi-Weight Sublimation စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Chenhao
- တောက်ပသောအရောင်၊ မြင့်မားသောလွှဲပြောင်းနှုန်း> 93%
Hi-Weight Sublimation Paper သည် အလွန်အမင်း ပုံနှိပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော မှင်ထုထည် သို့မဟုတ် နက်ရှိုင်းသော အရောင်များအောက်တွင် ပြားပြားနေပါသည်။ 140gsm Hi-Weight Sublimation Paper သည် မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အရောင်မှန်ကန်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အလွန်အမင်း မှင်ဝန်များကို ယူဆောင်သည်။ အမြင့်ဆုံး လွှဲပြောင်းမှု အထွက်နှုန်းဖြင့် ကြွယ်ဝပြီး နက်နဲသော အရောင်များကို ပုံနှိပ်ပြီး လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
တောက်ပသောအရောင်၊ မြင့်မားသောလွှဲပြောင်းနှုန်း > 93%
ဓာတ်ပုံ၊ အိမ်အလှဆင်၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ နဖူးစည်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆယ်နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသော sublimation စက္ကူ၏ ထိပ်တန်း coating စက်ရုံဖြစ်ပြီး၊ မြန်နှုန်းမြင့် coating line5ခုနှင့် နေ့စဉ်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်ခြင်းနှင့် အခွဲစက် 20 အစုံပါရှိသည်။ အလေးချိန် 35gsm မှ 140gsm၊ max roll width 320cm အထိ၊ jumbo roll length 10,000m အထိ၊ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများ ရနိုင်ပါသည်။
အခြေခံစက္ကူမှ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အထိ အရည်အသွေးသေချာစေရန်အတွက် အစုံအလင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား တန်ဖိုးအကြီးဆုံး sublimation စက္ကူကို ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားသော လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ အမြန်ပေးပို့သည့်ရက်စွဲနှင့် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ အခမဲ့နမူနာများသည် သင့်တောင်းဆိုချက်တွင်၊ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် အခမဲ့ခံစားရသည်။
1. ဆိုးဆေး sublimation စက္ကူကို သိမ်းဆည်းခြင်း - နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မှ ကာကွယ်ပါ။ ပုံမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေများ (23°C၊ 50% RH) တွင် မူရင်းထုပ်ပိုးမှုတွင်သာ ထားပါ။ ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုမီ အနည်းဆုံး 24 နာရီအတွင်း အိမ်တွင်းရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
2. dye sublimtion paper ၏ တာရှည်ခံခြင်း : လျင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့သော sublimation စက္ကူလိပ်များ သည် 12 လဖြစ်သည်။ တင်းကျပ်သော sublimation စာရွက် 6-8 လအတွက်အကြံပြုထားသည်။
3. ပုံများကိုပုံနှိပ်ခြင်းမပြုမီ စမ်းသပ်ဆွဲပါ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန်၊ မှင်နှင့် စက္ကူအညစ်အကြေးမရှိစေပါ။
ယခင်- 120gsm Hi-Weight Sublimation စက္ကူ
နောက်တစ်ခု: 105gsm Super Dry Sublimation စက္ကူ
120gsm Hi-Weight Sublimation စက္ကူ